किन उग्र बन्दैछन् महन्थ ठाकुर ? यस्ता छन् चार कारण - Pahilo News
किन उग्र बन्दैछन् महन्थ ठाकुर ? यस्ता छन् चार कारण
२९ मंसिर । केही दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, ‘तपाईंहरुले मधेसी गुमाइसक्नुभएको छ, अब मधेस गुमाउनुहुन्छ ।’
यसो भनेर उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र देशका प्रमुख नेताहरु उपस्थित ठाउँबाटै राष्ट्र टुक्रिने अभिव्यक्ति किन दिए होलान् ? ठाकुरले अरु मधेसी नेताभन्दा चर्को अभिव्यक्ति दिनुका पछाडि के मनोविज्ञानले काम गरेको होला ? ०४६ सालपछि दौरा–सुरुवाल लगाएर उपसभामुख, पटक–पटक सांसद र मन्त्री भएका महन्थ ठाकुरका दिमागमा कसले के हालिदिएको छ र उनी यति उग्र भएर राष्ट्र विखण्डन हुने अभिव्यक्ति दिँदैछन् ?
खोतल्दै जाँदा यसका पछाडि कम्तीमा चारवटा कारणले काम गरेको देखिन्छ ।
१. राष्ट्रपति हुन नपाएको कुण्ठा
महन्थ ठाकुर नेपाली कांग्रेसमा रहुञ्जेल मधेसी नेतामध्ये सबभन्दा बरिष्ठ थिए । डा. रामवरण यादवले मेडिकल अभ्यास गरिरहँदा ठाकुरले धेरैपटक जेलनेल भोगिसकेका थिए । ०४८ सालको निर्वाचनपछि उनी उपसभामुख भएका थिए । त्यसपछि उनले सूचना तथा सञ्चार, वन, वातावरणलगायतका मन्त्रालयल सम्हाले । तर, २०६३ मा लोकतन्त्र स्थापनापछि कांग्रेसबाट बाहिरिए उनले तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे ।
महन्थ ठाकुरका लागि यही नै दुर्भाग्य सावित भयो । निर्वाचन लगत्तै कांग्रेसले राष्ट्रपति, त्यो पनि मधेसबाटै उठाउनुपर्ने परिस्थिति आउँदा उनी टाढा पुगिसकेका थिए । त्यो मौका उनीभन्दा कनिष्ट डा. रामवरण यादवले पाए । पछिसम्म पनि शीतल निवासमा भेट्ने पुग्नेलाई राष्ट्रपति डा. यादवले खुलेरै भन्ने गर्थे, ‘अगर महन्थजी कांग्रेसमै रहेको भए मेरो दावी नै रहने थिएन, उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो ।
ठाकुरलाई नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन्, ‘यही पीडाले उनलाई अझ बढी कठोर र उग्र बनाइरहेको छ । जतिबेला उनी त्यो कुरा सम्झिन्छन्, त्यतिबेला सम्हालिनै सक्दैनन् ।’
२. निरन्तर पराजयको पीडा
कांग्रेसमा हुञ्जेल महन्थ ठाकुरले सर्लाहीबाट लोकप्रिय मत ल्याएर जित्ने गरेका थिए । तर, जब मधेसीहरुको हितका लागि भन्दै उनले पार्टी गठन गरेर, चुनाव लडे– दुबै चुनावमा जित्न सकेनन् । आफूभन्दा निकै कनिष्टहरुले हराइदिँदा उनमा निराशा र कुण्ठा बढेको छ ।
मधेस आन्दोलनको चर्को रापमा भएको ०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा ६५ वर्षीय ठाकुरलाई ३७ वर्षीय शिवपुजन रायले पराजित गरिदिए । मधेसी जनअधिकार फोरमका रायले १५ हजार ६ सय ८८ मत प्राप्त गरे भने ठाकुरले १५ हजार ४ सय १५ मत मात्र ल्याउन सके ।
०७० सालको निर्वाचन पनि महन्थ ठाकुरका लागि सुखद रहेन । अघिल्लो निर्वाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वीसम्म भएका उनी यसपटक तेस्रो स्थानमा मात्र धकेलिएनन्, आफैँले राजनीतिमा लगाएको र एउटै स्रोत भएको अमरेशकुमार सिंहबाट पराजित भए । यसपटक सिंहले १७ हजार ४ सय मत ल्याए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी शिवपुजन रायले १० हजार ३ सय ६५ मत ल्याए । जबकि, ठाकुरले ७ हजार ३२ मत मात्र प्राप्त गरे ।
यसबाट के देखिन्छ भने आफ्नै क्षेत्रमा महन्थ ठाकुरको लोकप्रियता घट्दो छ र सधैँ हारिरहने निर्वाचनप्रति नै उनमा वितृष्णा बढ्दो छ । त्यही भएर पनि ठाकुर निर्वाचन गरेर लोकतन्त्र सुचारु गर्ने कुरामा त्यति इच्छुक छैनन् ।
३. ठूलै पद दिलाइदिने आश्वासन
माथि नै उल्लेख भइसक्यो– महन्थ ठाकुर पटकपटक सांसद र मन्त्री अनि एकपटक उपसभामुख भइसकेका छन् । उनी अरु मधेसी नेता जस्तो भ्रष्टाचार वा यस्ता अरु कुनै काण्डमा मुछिएका नेता होइनन् । यस्तो बेलामा प्रदेशको निर्वाचन होला र मुख्यमन्त्री वा अरु कुनै पद पाउँला भन्ने आशा पनि उनमा कमै देखिन्छ । उनको यही मनोविज्ञान बुझेर यसैगरी लागेमा भोलि कुनै ठूलै पद दिलाइदिउँला भन्ने आश्वासन प्राप्त भएको हुन सक्छ ।
नजिकै आएर गुमेको राष्ट्रपति पद ठाकुरको दिमागबाट पक्कै पनि हट्न सकेको छैन । सम्भवतः भोलि द्वन्द्व बढाउँदै लगेर कुनै सम्झौतामा पु¥याउने र त्यसबाट ठाकुरलाई लाभको ठूलै पद दिलाउने योजना भएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिन्छ ।
४. घर्किंदो उमेरको दवाव
महन्थ ठाकुर अहिले ७४ वर्ष पुगिसकेका छन् । उनले गठन गरेको पार्टीमा सबै पुराना नेता मात्रै छन्, नयाँको आकर्षण छैन । मधेसकै मुद्दाका आधारमा राजनीति गर्ने नेताको नाम लिने हो भने राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, हृदेश त्रिपाठी आदि पछि मात्रै उनको नाम आउँछ । दुःखद पारिवारिक पृष्ठभूमि, घर्किंदो उमेर अवस्था, पराजित वर्तमान र अनिश्चित भविष्यको विरोधाषले पनि ठाकुरलाई उग्र हुन सघाइरहेको देखिन्छ । उसो त ठाकुर पहिलेदेखि नै अलि उग्र स्वभावको नेता भएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु सम्झिन्छन् ।
निष्कर्षमा, ठाकुरले बुझ्न नसकिरहेको कुरा होः शक्ति केन्द्रहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्छन् र आवश्यकता पूरा हुनासाथ आँपको कोया जसरी फ्याक्छन् । जुन शक्तिले उनलाई यति आड–भरोषा दिइरहेको छ, त्यही शक्तिले आफूले जित्दै आएको निर्वाचन क्षेत्रमा अमरेशकुमार सिंहलाई उठाएर आफूलाई हराएको तथ्य महन्थ ठाकुरले जुन दिन बुझ्नेछन्, सायद त्यो दिन धेरै ढिला भइसक्नेछ ।